Tsy demaokrasia raha maniry “filoham-pirenena mandrakizay” ireo mpifidy ao Roandà? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 29 Novambra 2019 15:26 GMT
(Marihana fa efa tamin'ny taona 2015 ny lahatsoratra teny Anglisy)
Filohan'i Roandà Paul Kagame nandritra ny forum manerantany momba ny toekarena ao Afrika 2009 tao Cape Town, Afrika Atsimo. Sary navoakan'ny World Economic Forum araka ny Creative Commons.
98% n'ny Roandey no nifidy tamin'ny 18 Desambra 2015 mba hanova ny lalàmpanorenan'izy ireo hahafahan'ny filoha Paul Kagama hilatsaka hofidiana fanintelony amin'ny taona 2017. Raha ara-teknika, dia hahafahan'i Kagame mijanona eo amin'ny fahefana hatramin'ny taona 2034 izany. Hahafahany mirotsaka fanim-pitony fanampiny ary avy eo fe-potoam-piasana roa-dimy taona ilay lalàmpanorenana.
Notsikeran'ny mpanohitra sy ireo mpikatroka ny zon'olombelona ary koa ireo mpiara miombon'antoka ho an'ny fampandrosoana iraisam-pirenena tahaka ny Etazonia sy ny vondrona Eoropeana ny fitsapan-kevi-bahoaka.
Misy ny adihevitra mitohy ao amin'ny firenena Afrikanina marobe mikasika ity fe-potoam-piasana fahatelo ity, izay nitarika fitroarana sy fahafatesana sivily tao amin'ny firenena tahaka an'i Borondi, Repoblika Demaokratikan'i Kongo sy Burkina Faso ity. Nitsipaka ny hevitra famerana ny fe-potoam-piasana indroa miatoana ho an'ny filoham-pirenena manerana ny faritra ny fivorian'ny Vondrona Toekaren'ny Fanjakana Afrikanina Andrefana (ECOWAS na CEDEAO) tamin'ny volana Mey 2015 tany Accra, Ghana, rehefa nanohitra izany fanapahan-kevitra izany i Gambia sy Togo, ireo firenana hany tsy manana fetra amin'ny fe-potoam-piasana.
Mampiseho ny fikarohana mifototra amin'ny fanadihadiana tany amin'ireo firenena Afrikanina 34 notontosain'ny Afrobarometer, tetikasa iray mandrefy ny fiheveran'ny besinimaro any Afrika atsimon'i Sahara fa manohana famerana fe-potoam-piasana indroa ny ankamaroan'ny Afrikana. 18 ireo firenena Afrikanina tsy manana fetra amin'ny fe-potoam-piasan'ny filoham-pirenena.
Nilaza ireo mpanao lalàna Roandey tamin'ny volana Aogositra 2015 fa nampiseho ny fifampidinihana manerana ny firenena fa Roandey 10 monja no manohitra ny hevitra fe-potoam-piasana fahatelo.
Nisaran-kevitra tanteraka momba ny fitsapan-kevi-bahoaka ireo Roandey sy ireo mpiserasera hafa manerantany manaraka ny vaovao politika Roandey. Milaza ireo mpanohana an'i Kagame fa dingana demaokratika ny fitsapan-kevi-bahoaka mba hahafahan'ny olom-pirenena Roandey hamaritra ny hoavin'izy ireo manokana. Nilaza ny mpanohitra na izany aza fa nisy hosoka sy ankahamehana loatra ny dingana. Nomarihin'izy ireo ihany koa fa tsy i Kagame irery no olona manana fahaiza-mitantana ao amin'ny firenena.
‘Ny safidinay, ny fahamendrehanay’
Manoloana ny fanamelohana avy any Andrefana, dia nilaza i Thierry Gatere, Roandey mpisolovava mpiaro ny zon'olombelona fa “nanao hosoka” ny fanambaran'izy ireo momba ny fitsapan-kevi-bahoaka ny governemanta tandrefana. Miresaka momba ny tsikera fa tsy nomena fotoana ampy hiadiana hevitra ireo mpifidy, nanoratra izy hoe:
Raha ny momba ny olom-pirenena, ny vahoaka Roandey; efa niresaka momba an'io fanontaniana io izy ireo nandritra ny efa-taona na mihoatra. Tena mampatahotra, saingy tsy mahagaga raha nilaza ireo fanambarana avy amin'ny fahefana tandrefana fa tsy nomena fotoana ampy handinihana fanontaniana izay, araka ny fomba sy ny tantara rehetra, dia novolavolaina, reraka sy mbola tsy masaka ireo mpifidy. Diso fanantenana aho namaky ireo fanambarana avy amin'ny governemanta amerikanina sy ny vondrona eoropeana, izay samy nilaza fa tsy manam-potoana firy ho an'ny adihevitra momba ny lalàm-panorenan'izy ireo ny Roandey.
Nanamarika izy fa notanterahina tamim-pahombiazana ny fitsapan-kevi-bahoaka ary tao anatin'ny fotoana vetivety.
Nisaina ampahibemaso ny vokatra ary nozaraina avy hatrany tamin'ny media sosialy; be loatra ka nanao ny fanisana izahay manokana, ary niantso ny vokatra talohan'ny nilazana azy tamin'ny fomba ofisialy.
Fifidianana notontosaina tamim-pahombiazana izany, natao tao anatin'ny fotoana fohy, ary nambara ny alin'iny ihany ny valim-pifidianana savaranonando ary niafara tamin'ny fankalazana nanerana ny firenena.
Matetika ny fanjakana Afrikanina voatsikera noho ny hoso-pifidianana. Saingy, ny tsy dia resahina loatra dia nisy hosoka bebe kokoa mihitsy aza ny fanambaran'ny tandrefana momba an'i Afrika, ary momba an'i Roanda manokana.
Tanora mpikatroka Philemon Mbayisha nisioka hoe:
1/1 Rahoviana i #Etazonia no hitsahatra tsy hitsabaka amin'ny raharahan'ny firenena hafa intsony? Tamin'ny taona 1994, nitondra fiaramanidina i Etazonia mba hanala ny#Amerikana.
Nitranga tamin'ny taona 1994 ny fandripahana Roandey.
Nangataka fanajana avy amin'ny ambasadaoro Amerikana ao Roandà, Erica Barks-Ruggle, ilay mpianatra teknolojiam-baovao Alain Murara, rehefa avy nizara ny fanambaran'ny Trano Fotsy momba ny fitsapan-kevi-bahoaka:
@USAmbRwanda Fahamendrehanay ny Safidinay. Hajao izany farafaharatsiny. #RwandansDecide #RwandaReferendum
Mpisera Twitter Ali Naka nampiseho fa tsy mitondra fampandrosoana ny fanovana filoham-pirenena:
Zambia Filoha 6, Zimbaboe filoha mpanatanteraka 1 tara folo taona aorian'i Roandà …..misy dikany ny TOE-JAVATRA
‘Ny vahoaka Roandey no miaina ny andavanandron'i Roandà’
Niresaka momba ny fitantaran'ny media ny fitsapan-kevi-bahoaka ireo mpanohana sasany an'i Kagame. Hoy i Brain Dogon:
Ny vahoaka Roandey no miaina ny andavan'andron'i Roandà, fa tsy ny New Yord Times. Tsy misy dikany ny hevitr'izy ireo
Niampanga ny New York Times ho miavonavona ny minisitry ny raharaham-bahiny sy ny Fiarahamihasa ao Roandà, Louise Mushikiwabo:
Mandidy ny filohan'i #Rwanda mba hiala ny @TheNYTimesUM. Izany tokoa ve? Taonan'ny avonavona sy ny tsy fahalalana izao?
Nitaky fotoana fahanginana ho an'ireo mpanao gazety izay niandry vaovao ratsy i Elodie Shami:
Fotoana fahanginana ho an'ireo mpanao gazety nanantena vaovao ratsy tao Roandà noho ny fitsapan-kevi-bahoaka. Miala tsiny. Tsy misy tantara ho anao.
Afaka manapa-kevitra ny Roandey mba hanova ny lalàmpanorenan'izy ireo araka ny tian'izy ireo, nisioka ilay mpanao gazety James A. Munyaneza hoe:
Manontany tena izy ireo: Tamin'ny taona 2003, nandany lalàmpanorenana vaovao isika, ankehitriny isika nifidy hanitsy izany araka ny irintsika, nahoana no misy olona manakana antsika
Ahoana no fijerin'ny ankamaroan'ny olona nifidy ny tsia? hoy ny mpisera iray nanontany:
Raha nifidy ny “Tsia” ny Roandey nandritra ny fitsapan-kevi-bahoaka, dia hilaza ny sasany fa ohatra amin'ny demaokrasia i Roandà!
‘Mazava, tokony ho eny izany, izany no irian'i Kagame!’
Tsy ny rehetra no tafiditra tamin'ny voka-pifidianana. Naniry ilay matihanina momba ny seraseram-bahoaka Geoffrey Maumo mba handray lesona avy amin'i Nelson Mandela ireo mpitarika Afrikanina:
Arahabaina #RwandansDecide #RwandaReferendum #Rwanda saingy maniry aho mba handray lesona avy amin'i @NelsonMandela ireo mpitarika Afrikanina @dailynation @kot
Rehefa nandany 27 taona tany am-ponja nandritra ny vanim-potoanan'ny Apartheid tao Afrika Atsimo, Mandela irery ihany no nanao fe-potoam-piasana iray tamin'ny filoham-pirenena.
Namazivazy ny fampiasana “Eny” sy “Tsia” tamin'ny toe-draharaha ara-politika Roandey ny kaonty NYC Philosophizer:
Na ahoana na ahoana, mitovy ny dikan'ny Eny sy Tsia ao #Rwanda. TSIA = TSIA iray saingy mandresy Kagame = 99%.
Christine Nyabare nihevitra fa fehin-kevitra efa nihemorana teo aloha ny vokatra tamin'ny fitsapan-kevi-bahoaka:
Mazava ho azy, tsy maintsy eny izany, naniry izany i Kagame!
Ny fitsapan-kevi-bahoaka, araka ilay bilaogera Dikembe, nanolotra ny raharaha raha ny ilay vahaolana ihany no olana:
#RwandaReferendum no “vahaolana Afrika” miavaka ho an'ny “olana Afrikana” ka ny vahaolana ihany no olana
Smith Kennedy, izay nitantana ny tetikasa Zon'Olombelona Robert F. Kennedy ho an'ny Afrika Atsimon'i Sahara nanazava ny antony tsy nahataitra azy tamin'ny voka-pifidianana:
Tsy mahagaga ahy raha ny 98%n'ny Roandey no nifidy hamela an'i #Kagame hirotsaka hofidiana indray. Nandositra, any am-ponja na maty ny maro tamin'ireo mpitsikera azy.
Farany, ilay Aostraliana mpifidy, Alexander Ellerston nanontany ny tsiambaratelo ambadiky ny fanisam-bahoaka 98%:
Arahabaina ny vahoakan'i Roandà – fifanekena 98%! Mahita ny 55% sarotra izahay…inona no tsiambaratelonareo?